Madaxweyne Doorashiisa Lagu Murmay Oo Lagu Hareereeyay Caasimadda Dalkaasi – Borama News Network
Madaxweyne Doorashiisa Lagu Murmay Oo Lagu Hareereeyay Caasimadda Dalkaasi
Dowladda Jamhuuriyadda Afrika Dhexe ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah, xilli ciidamadeed iyo kuwa Qaramada Midoobay ay la dagaallamayaan jabhado ku soo siqaya caasimadda Bangui, isla markaana doonaya inay la wareegaan awoodda dalkaas.
Xooggaga dowladda la dagaallamaya oo hadda gacanta ku haya saddex meelood oo meel dalkaas ayaa hareereeyay caasimadda Bangui.
Ergeyga Qaramada Midoobay u qaabilsan Jamhuuriyadda Afrika Dhexe ayaa ka digay in dalkaas uu “wajahayo xaalad khatar ah.”
Jabhadaha ayaa diiddan natiijada doorashadii dhacday bishii hore oo uu mar labaad ku guulaystay Madaxweyne Faustin Archange Touadéra.
Xaaladda degdeg ah ee waddankaas la geliyay Khamiistii ayaa socon doonta muddo 15 maalmood ah, sida uu sheegay afhayeenka dowladda, Albert Yaloke Mokpeme.
Waxa uu sheegay in askarta ay dadka xiri karaan iyagoo aan maxkamad u marin.
Weriyaha BBC uga soo warrama Bangui, Pacôme Pabandji, ayaa sheegay in inta badan shacabka caasimadda aanay la yaabin xaaladda degdega ah, maadaama uu todobaadyadii dambe sii xumaanayay amniga guud.
Sida laga soo xigtay laamaha ammaanka, xaaladda degdega ah ayaa muhiim noqotay kadib markii la ogaaday in xukuumadda dalkaas ay wajahayso khatar amni oo xooggan.
Deg Deg : Qarax Ka Dhacay Magaalada Muqdisho Faahfaahino Ka Soo Baxaya
Barnaamijka Ma Ogtahay Iyo Qaybo Ka Mid Ah Noolayaasha Iyo Arimo Cajiib Ah
Doorasho Maanta Ka Dhaceysa Dalka Ghana Iyo Musharaxiin Isku Heysa Doorashada Dhacaysa
Ciidanka Nisa Ee Jubaland Oo Hawlgalo Ka Sameeyay Magaalada Kismaayo
Bnnstaff Bnnstaff October 18, 2021 October 18, 2021
Nin Somali Ah Xukun Dheer Oo Xabsi Ah Lagu Riday Iyo Sobobta Keentay
Bnnstaff Bnnstaff September 7, 2021